Precision ရောင်းချ semi Casting မျက်မှန် Frame က Die China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Precise ထုတ်ကုန်များ,semi Solid ကာစ်တင်စက်များ,semi Solid ကာစ်တင်လျှောက်လွှာ
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > semi Solid သေကာစ် > Precision ရောင်းချ semi Casting မျက်မှန် Frame က Die
အဆိုပါ semisolid အလွယ်တကူဘုံသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော dendrite ကွန်ယက်ကိုအရိုးစုကွဲပြား granular တစ်ရှူးပုံစံဖွဲ့စည်းဖို့လည်းကျိုးကြောင်းဒါကြောင့်တိကျမျက်စိဘောင်, semisolid သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, ချ. , အရှင်အောင်, အရည်သတ္တုများ၏ solidification လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နှိုးဆော်နေပါတယ်သေဆုံး အဆိုပါ semisolid သတ္တုအရည်ပြီးတော့ billet သို့မဟုတ် Cast ထဲသို့ ချ. ။ semi အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ, လေကြောင်း, အီလက်ထရွန်းနစ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, စတာတွေအတွက်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်